जुन देशमा मर्नका लागि प्रशस्त कारण छ – This is personal site of Prem Baniya
Posted on February 24, 2016 December 29, 2016 AuthorPrem BaniyaLeaveacomment
यो त्यस्तो देश हो, जहाँ मान्छेहरु मर्नका लागि अनेकौं र प्रशस्त कारण तयार छ । जस्तो कि, सडक-सडकमा मर्नेहरुको संख्या वर्षेनि सयौं पुग्छ, वार्षिक सरदर १५ सय मानिसहरु सडक दुर्घटनामा परेर मर्दछन् । आकासमा मर्नेहरुको संख्या त्यसभन्दा केही कम भएपनि डरलाग्दो तथ्यांक छ । बाढीपहिरोले त झन् धेरै मानिसहरुको जीवन चुँडालेर लान्छ । र, यस्ता बिपत्तीका अरुअरु रुप र शीर्षकहरु पनि छ यहाँ, भूईंचालोले के-के गर्यो ? त्यो भोगिएकै छ । करेण्ट लागेर मर्छन् कोही, उपचार नपाएर मर्नेसम्मको तथ्यांक छ यो देशमा । आखिर मर्नका लागि प्रशस्त कारण छ तर बाँच्न र बचाउनका लागि कोशिश गर्नेहरु थोरै !!! र, बुधबार विहान ७ बजेर ५० मिनेट जाँदा काँस्कीको पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको नाइनएन, एएचएच कलसाइन रहेको टुइनअटर जहाज म्याग्दी, दानापानी गाविस तिर्खेढुंगामा दुर्घटना भयो र त्यसमा सवार सबै २३ जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेहरुमा दुई वालवालिका, तीन चालक दलका सदस्य, दुई विदेशी : कुबेत र चीनका सहित नेपाली यात्रुहरुको जीवन गयो ।
जहाज कम्पनी तारा एयरले विज्ञप्ती निकालेर भनेको छ दुर्घटनाग्रस्त जहाज गत असोज ९ गते क्यानाडाबाट नेपाल ल्याएको हो र दुर्घटनामा परेका क्याप्टेन रोशन मानन्धरले नै क्यानडाबाट उडाएर नेपाल ल्याएका थिए । बिज्ञप्ती अनुसार उक्त वायुयान हालसालै क्यानाडाको भाइकिङ कम्पनीबाट ल्याइएको हो र त्यो अत्याधुनिक प्रविधि जडित थियो । यसको अर्थ जहाजमा कुनै खराबी थिएन भन्ने कम्पनीको दाबी हो र आप्mनो कम्पनीको जहाजको खराबी नभइ चालक तथा मौसमको खराबीलाई लक्षित गर्न खोजिएको छ । तर, नेपालमा तारा एयर र यसको माउ संस्था यति एयरका जहाजहरु नै बढी दुर्घटनाग्रस्त भइरहेको यथार्थ छ । यो यथार्थबीच नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ अत्यन्तै बढी हवाई दुर्घटना हुने गरेको छ । वर्षेनि वा वर्षमा एक, दुई वटा जहाज दुर्घटना भएन भने आश्चर्य मान्नुपर्ने गरी घटना हुन्छ यो देशमा ।
र, यो त्यस्तो देश हो, जहँ मान्छेहरु मर्नका लागि अनेकौं र प्रशस्त कारणहरु तयार छन् । जस्तो कि, सडकसडकमा मर्नेहरुको संख्या वर्षेनि सयौं पुग्छ । एक तथ्यांक अनुसार वार्षिक सरदर १५ सय मानिसहरु सडक दुर्घटनामा परेर मर्दछन् । आकासमा मर्नेहरुको संख्या त्यसभन्दा केही कम भएपनि डरलाग्दो तथ्यांक छ । बाढीपहिरोले त झन् धेरै मानिसहरुको जीवन चुँडालेर लान्छ । यस्ता बिपत्तीका अरुअरु रुपहरु र शीर्षकरु पनि छन् यहाँ, भूईंचालोले केके गर्यो ? त्यो भोगिएकै छ । करेण्ट लागेर मर्छन् कोही, कोही उपचार नपाएर मर्नेसम्मको तथ्यांक छ यो देशमा । आखिर मर्नका लागि प्रशस्त कारणहरु छन् तर बाँच्न र बचाउनका लागि कोशिश गर्नेहरु थोरै !
← Previous Previous post: यो हार हो कि जित ?
Next → Next post: प्रधानमन्त्री पद दसौं वर्षका लागि ‘बुक्ड’ भइसकेको देश !